यस्तो भए २०७२ सालको भूकम्पमा २२ घन्टा पु’रिएका सोनिस ! – Sapana Sanjal
May 27, 2021 374
Sapana Sanjal : निलो टिसर्ट र हाफ पाइन्ट लगाएका फुच्चे केटो दुगुर्दै कोठाभित्र पसे। उनको हातमा स्कुलको रिजल्ट थियो। पछिपछि उनकी आमा रश्मिला अवाल थिइन्। ‘खोइ, खोइ! रिजल्ट हेरौं त,’ हाम्रो आवाज सुनेर उनी एकछिन अलमलमा परे। ढोकामै अडिएर आमाको अनुहारतिर हेरे।
Prevआजको आफ्नो राशिफल हेरि सच्चा मनले एक सेयर गर्दै सुपा देउराली माताको दर्शन गर्नुहोस।।।
Nextशरिरको सबै मासुहरु झरे,शरीर पुरै डरलाग्दो ,कठै बिचरा ,मन थामेर (हेर्नुस् भिडियो )
बुद्धका जीवनी तथा उपदेशहरू